Glass Bottle Factory - China Glass Bottle Abakhiqizi, abahlinzeki
Ubisi, ama-juice, amanzi kungagcinwa esitsheni esivimba umoya ngaphandle kokuthatha isikhala esilinganiselwe seshalofu lesiqandisi.
Ibhodlela lobisi nge-Air Tight Rust-Proof Golden Colour Cap ukukunikeza isipiliyoni sokuphuza esinempilo kakhulu.
Ilungele ubisi, amajusi wakho owathandayo, ukuqhaqhazela, ama-smoothies, ama-cocktails, noma amanzi alula.
Ibhodlela Lamanzi nge-Air Tight Cap ukukunikeza isipiliyoni sokuphuza esinempilo kakhulu.
Ilungele ukudla kwasekuseni, ama-BBQ, amaqembu engadi, imishado, amapikiniki, uhambo lwasolwandle nokuningi!.
Ibhodlela lewayini elingu-1000ml eliyindilinga
Ibonisa iwayini lakho elihle, iwhisky noma utshwala kule decanter eyenzelwe kahle
IStopper singena kahle esicongweni se-decanter ukuvala umoya ukuvimbela ukuvezwa ngokweqile kwe-oxygencognac / brandy, utshwala noma i-vodka
Yenziwe ngekhwalithi ephezulu, ingilazi ewugqinsi ngesivalo sengilazi esiqinile
Ukwengezwa okufanele kubha yakho yasekhaya futhi kwenza nesipho esihle kakhulu kunoma yisiphi isenzakalo esikhethekile
Ibhodlela ngalinye lifaka i-cap eyengeziwe ye-BPA-free Reusable Plastic Snap Cap- 48 MM enophawu oluqinile. I-Lid Snaps ivuliwe futhi ivaliwe kepha igcina uphawu lokuvuza
KWENZIWE E-USA - Akusekho ukuthanda okungalungile futhi awekho amakhemikhali angena esiphuzweni sakho, le ngilazi ayinamthofu, iyaphinda isebenze, i-100% ivuseleleke kabusha, futhi i-eco-friendly
Amabhodlela awugqinsi wekhwalithi akhethekile enziwa ukusetshenziswa kwansuku zonke nokusetshenziswa kabusha, ajiyane kakhulu futhi aqine kakhulu kunenye "ingilazi elahlwayo". Umshini wokuwasha izitsha Uphephile
Ukonga isikhala- Okwakheke ngokukhethekile ukulingana amashalofu eminyango eminingi yesiqandisi ngenkathi ungeza ukubukeka okuvamile kwamabhodlela obisi lwevintage
1000ml ecacile ingilazi isiphuzo ibhodlela
Imbiza ephelele yokuvubela ukudla okunempilo, okuqinisa ukukhushulwa komzimba kanye neziphuzo ezifana nekombucha, kefir, sauerkraut, kimchi; amathuba awapheli!
Ungakwazi futhi ugcine izingxenye ezinkulu zezithelo nemifino oyithandayo njengezinqathe, isilimo esinengono emnandi edliwayo, amapheya, utamatisi, upelepele, nokunye okuningi.
Ibhodlela lesiphuzo sesibani esingu-500ml
500ml aluminium embozwe isiphuzo ibhodlela